Cartier တော်ဝင်စုဆောင်းမှု - Reine Makéda Necklace | HIGH ရတနာအိပ်မက်
[ပလက်တီနမ်၊ မိုဇမ်ဘစ်မှဘဲဥပုံသတ္တဝါပတ္တမြား (၁၅.၂၉ ကာရက်)၊ D IF IF ပုံသဏ္ဌာန်နှင်းဆီပန်း (၃,၅၁ ကာရက်)၊ E VS15,29 သစ်တော်သီးပုံတူနှင်းဆီ - စိန် (၅,၁၀ ကာရက်) , cabochon-cut နှင့်ရှုထောငျ့ပတ္တမြားပုတီး, သစ်တော်သီးပုံနှင်းဆီ - ဖြတ်စိန်, ချိန်ညှိစိန်, တောက်ပ - ဖြတ်စိန်။ ပတ္တမြား chocker နှင့်စိန်လည်ဆွဲများကိုသီးခြားစီဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ ]
Cartier ဖန်တီးမှုတိုင်းသည်ကျောက်တုံးဖြင့်စတင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်, 15.29 ကာရက်အလေးချိန်မိုဇမ်ဘစ်ကနေရှည်လျားဘဲဥပုံပတ္တမြား။ ၎င်းသည်ရူပနှလုံး၊ ပုံသဏ္everyာန်အမျိုးမျိုးရှိသည့်အရောင်၊ ကြွယ်ဝသော၊ တောက်ပသောမီးများရှိသည့်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလွန်သန့်ရှင်းသောကြည်လင်ပြီးအနီရောင်နက်ရှိုင်းစွာဖြင့်လိမ္မော်ရောင်နှင့်အပြာရောင်အရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဤပတ္တမြားသည် Cartier အားရင်းနှီးမှုနှင့်အခမ်းအနားနှစ်ရပ်စလုံးပါ ၀ င်သောအံ့မခန်းဖွယ်လည်ဆွဲဒီဇိုင်းဆွဲရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
ဤလည်ဆွဲနောက်ကွယ်မှအယူအဆမှာ“ ဒုတိယအသားအရေ” ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် couture လောကမှယူဆောင်လာသည့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သောရတနာများ Cartier ၏အစဉ်အလာတွင်လည်ဆွဲကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်ပတ္တမြား choker ကိုခွဲထုတ်ထားနိုင်သည်။
ဒီအပိုင်းကိုနာရီပေါင်း ၃,၃၂၀ နာရီ ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးရတနာ၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်နှင့်အသုံးပြုထားသောထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်လူသားတစ် ဦး ၏စိတ်ခံစားမှုသည်မိမိ၏ကာမဂုဏ်၌တည်သည်။
Tags:နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် • Cartier • စိတ်ဝင်စားခြင်း • ပတ္တမြား
မှတ်ချက်2ခုCartier Royal collection - Reine Makéda Necklace"
အိုဘုရားသခင်! အထင်ကြီးစရာဆောင်းပါး dude! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သို့သော်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသည်
သင့်ရဲ့ RSS နှင့်အတူပြissuesနာများကို။ ငါအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်မသိရပါဘူး
ငါကစာရင်းသွင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ အခြားဆင်တူသည့် RSS ပြသနာများရှိပါသလား။
ဂလော်ဒီယာ Carletti Camponeschi
ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိစစ်ဆေးနေသည်၊ သို့သော်သင် HJD ကိုလိုက်လိုပါကပို့စ်အသစ်တစ်ခုထုတ်ဝေတိုင်းအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်မှာဒီရွေးစရာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။